Isimboli: Yongeza ii-Icons zeNtlalo kuyo nayiphi na indawo enale Fonti yeWebhu! | Martech Zone
NgoLwesithathu, Oktobha 31, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Phantse yonke indawo kwiwebhu isebenzisa intlalo icons ukubonisa amakhonkco kwiTwitter, Facebook, LinkedIn nakwezinye iidilesi zentlalo kwiwebhu. Iibrawuza zangoku zinika ithuba lokufaka iifonti, ukuvumela amathuba angenamda kuyilo lobukho bakho bewebhu.
Sasisebenza kwindawo entle yomthengi eyayiyilwe KA + A. Sisebenzisane nabathengi abaninzi… bakhupha uphawu kunye noyilo emva koko silwenza ngokwezifiso, silulungiselele size siludibanise nabaxumi bethu. Bekumnandi kuba abayili babo bengakhi kuphela iisayithi ezintle, babhala nekhowudi entle.
Umthengi wethu usicelile ukuba songeze umfanekiso we-LinkedIn kunye nekhonkco kumazantsi ekunene kwendawo yabo. Xa sijonga ngakumbi, safumanisa ukuba ayingomfanekiso konke konke. Yayiyifonti eyayibonisa iTwitter neFacebook! Ukwenza into ngokukhawuleza ngokukhawuleza, sikwazile ukubona ukuba bazalisekisile ii icon zentlalo ezivela kwi-Symbolset.
Iimpawu ziifonti zeesimboli zesemantic. Basebenza kwizikhangeli zangoku kunye naphina kwiimpawu ze-OpenType ezixhaswayo.
Oku kusebenza ngokufanelekileyo! Iifonti zinokuphinda zilungiswe, zinayo nayiphi na imibala, kwaye zinezinye iindlela zokuloba ezisetyenziswa ngeCSS, njengokuhamba ngomzekelo. Kwaye ulayishe iifonti ngokukhawuleza okukhulu. Ukusuka kwimbono yophuhliso, bekungafuneki ukuba umyili wethu avelise ii icon ezintsha zentlalo ezazinemibala efanayo, ubungakanani kunye nesitayile sezinye. Kufuneka sisebenzise ikhowudi ye-HTML ye icon ye-LinkedIn, siyisongele kwi-anchor tag, kwaye sahamba!
Iisimboli zeNtlalo yi- $ 3 kuphela kwaye iza neempawu ezikhoyo ngoku:
I-Kudos ukuya kwi-KA + A yokuphumeza okunje. Ndiqinisekile ukuba siza kufumana itoni yamanye amathuba okubandakanya ii icon zeMpawu kwiindawo zethu. Inqaku lokugqibela, abanazo nje ii-Icon zoLuntu, banoluhlu lweefonti ezininzi… iisimboli… iisimboli.
tags: I-icon ye-facebookUGoogle plus iconicon ye-linkinIimpawu zentlaloI-icon ye-twitter
Umxholo wentengiso xa kuthelekiswa nentengiso